ဇဝေဇဝါ ဖြစ်စရာကောင်းနေတဲ့ Robert Pattinson နဲ့ Kristen Stewart တို့ရဲ့ ပြန်လည်ဆုံဆည်းမှုတစ်ခု - MoviesFan Movie News
ဇဝေဇဝါ ဖြစ်စရာကောင်းနေတဲ့ Robert Pattinson နဲ့ Kristen Stewart တို့ရဲ့ ပြန်လည်ဆုံဆည်းမှုတစ်ခု
နာမည်ကျော်မင်းသား Johnny Depp ရဲ့ သမီးဖြစ်သူ Lily-Rose Depp ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်တွေထဲက သောကြာညချမ်းတစ်ခုမှာ သူမရဲ့ ၁၉ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ပွဲကို Chateau Marmont ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒီပွဲကို တက်ရောက်လာကြတဲ့ ဧည့်သည်တွေထဲမှာ Robert Pattinson နဲ့ Kristen Stewart တို့လည်း ပါ၀င်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ကမ္ဘာကျော်စုံတွဲတွေထဲကတစ်တွဲမို့ အရင်တုန်းက ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြပေမယ့် အခုတော့ လမ်းခွဲပြတ်စဲပြီးခဲ့ကြတာ ကြာခဲ့ပြီဆိုတာကို အားလုံးလည်း သိပြီးသားနေမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီညကတော့ သူတို့ဟာ ပွဲခင်းထဲက လူရှင်းတဲ့တစ်နေရာမှာ နှစ်ယောက်သား စကားတွေ ရပ်ပြောနေခဲ့ကြပါတယ်တဲ့။
အဲဒီလို သတင်းနဲ့အတူ သူတို့နှစ်ယောက်ကို အဲဒီနေရာမှာ မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေကနေတစ်ဆင့် အမှတ်တမဲ့ ချောင်းရိုက်ထားဟန်ရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံတချို့ဟာ ခုရက်ပိုင်းတွေထဲ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ပလူပျံနေခဲ့တာလည်း အမှန်ပါပဲ။ အဲဒီညက Pattinson ဟာ ပုံထဲမှာ မြင်ရတဲ့အတိုင်း ဂျင်းဂျာကင်ကိုဝတ်၊ ဦးထုပ်ကို ဆောင်းထားပြီး sneakers ဖိနပ်ကို စီးထားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကို တွေ့ခဲ့ရတဲ့ မျက်မြင်သက်သေတစ်ယောက်က E! News မီဒီယာကို ခုလို ထုတ်ပြောခဲ့တာပါ။
Pattinson ဟာ အဲဒီညတုန်းက Kristen နဲ့ စကားရပ်ပြောနေခဲ့တာ မိနစ်နည်းနည်း ကြာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ပုံစံကို ကြည့်ရတာ ဘော်ဒါတွေ ပြန်တည့်နေကြတဲ့ ပုံစံမျိုးပဲ။ Pattinson က ခြေစုံရပ်ပြီး Kristen နဲ့ စကားပြောနေချိန်မှာ Kristen ကတော့ စီးကရက်သောက်နေခဲ့တာပါ။ ပြီးတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ပုံစံကို ကြည့်ရတာ အလေးအနက် ရှိနေကြတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က ကားတစ်စီးရဲ့နောက်မှာ ရပ်နေကြတာမို့ သိပ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မမြင်ရတာတော့ အမှန်ပါ
အဲဒီသတင်းကြောင့် Twilight ဇာတ်ကားတွေရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ အံ့သြဝမ်းသာနေကြမလား မသိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ အဲဒီ Twilight ဇာတ်ကားတွေကို စရိုက်ရင်းနဲ့မှ ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားခဲ့ကြရတာမို့ပါ။ ပြီးတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ (သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်နဲ့ လူမိန်းကလေးတို့ရဲ့) ဘဝချင်းမတူပေမယ့် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သိပ်ချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူတွေအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ကောင်းခဲ့ကြသလို အပြင်လောကမှာပါ တကယ့်ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားခဲ့ကြတော့ ပရိသတ်အများစုက သူတို့စုံတွဲအတွက် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ သဘောတွေ စွတ်တူခဲ့ကြပြန်သေးတာမို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ လမ်းခွဲပြတ်စဲခဲ့ကြရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Kristen ဟာ သူမပါ၀င်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Snow White and the Huntsman ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူးခဲ့သူ ဒါရိုက်တာ Rupert Sanders နဲ့ အပြင်မှာ ဇာတ်လမ်းစရှုပ်နေခဲ့ရုံတင်မကဘဲ သူတို့နှစ်ယောက် နမ်းနေကြတဲ့ ပုံတွေပါ အပြင်ကို တရားဝင် ထွက်ပေါ်လာခဲ့တော့တာမို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒီဖြစ်ရပ်အတွက် Kristen ဘက်ကနေပြီး Pattinson ကို People Maeazine ကနေတစ်ဆင့် လူအများသိအောင် သေသေချာချာ တောင်းပန်ခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်။
ကျွန်မလေ… သူ့အတွက် တကယ့်ကို ၀မ်းနည်း နာကျင်ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူဟာ ကျွန်မရဲ့ မိုက်ပြစ်တွေကြောင့် ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်နဲ့ လူပုံအလယ်မှာ စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်စရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ကြုံနေခဲ့ရတာမို့ပါပဲ။ ကျွန်မကလည်း ကျွန်မပါပဲ။ ကိုယ်နဲ့အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ပြီး ကိုယ့်ကို အချစ်ဆုံးဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့ အရင်းဆုံးလူတွေကိုမှရွေးပြီး အနာကျင်ဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်နေမိတတ်တဲ့ လူစားမျိုးဖြစ်နေခဲ့တာကိုး
ခုလည်း ကြည့်လေ။ ကျွန်မကို သိပ်ချစ်တဲ့၊ ကျွန်မကလည်း သိပ်ချစ်ခဲ့ရတဲ့ Rob ဟာ လူမှုရေးစည်းမစောင့်တဲ့ အမှားမျိုးကို ကျူးလွန်မိခဲ့တဲ့ ကျွန်မကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာစရာတွေ ဖြစ်လာခဲ့ရပြီ။ အဲဒီအတွက် ကျွန်မအများကြီး ၀မ်းနည်း နာကျင်ရပါတယ်ရှင်
အဲဒီနောက်မှာ တော်တော်များများက သူတို့ကို ပြန်တွဲစေချင်ကြပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ ပြန်ပေါင်းထုတ်မယ့် အရိပ်အယောင်တွေ ပြမလာကြတော့ပါဘူး။ Kristen ဆိုရင် အမျိုးသားချစ်သူအသစ်တွေနဲ့ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် တွဲခုတ်လာခဲ့ရုံတင် အားမရနိုင်တော့ဘဲ၊ နောက်ပိုင်းမှာ သူ့ကိုယ်သူ Bisexual တစ်ယောက်အဖြစ် ခံယူလာပြီး နယူးဇီလန်က နာမည်ကြီးမော်ဒယ်လ် တစ်ယောက်ဖြစ်သူ Stella Maxwell ဆိုတဲ့ မော်ဒယ်လ်ကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ပါ ချစ်ကြိုက်ခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်တဲ့။
Pattinson ကလည်း Kristen နဲ့ လမ်းခွဲပြီးတဲ့နောက်… ၂၀၁၄ မှာ အဆိုတော် FKA Twigs ဆိုသူနဲ့ ချစ်ကြိုးသွယ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ဧပြီလထဲမှာ စေ့စပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Pattinson နဲ့ ချစ်သူအသစ်တို့ရဲ့ RS က အဲဒီအဆင့်ကနေ တက်မလာခဲ့တော့ဘဲ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်၂၀၁၇ အောက်တိုဘာမှာ ပြတ်စဲခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။
အခုတော့ လူလွတ်ဖြစ်သွားပြန်ပြီဖြစ်တဲ့ Pattinson ဟာ သူ့ကိုချန်ထားရစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Kristen နဲ့ ဒီလို စကားစမြည်တွေ ပြန်ပြောနေပြန်ပါပြီ။
အဲဒီမြင်ကွင်းဟာ အားလုံးအတွက် ‘သို့လောသို့လော’ တွေးချင်စရာပါပဲ။ သူတို့ပရိသတ်တွေကတော့ ၀မ်းသာနေကြမှာ အမှန်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပရိသတ်တော်တော်များများဟာ သူတို့လမ်းခွဲခဲ့ကြရတုန်းက ၀မ်းနည်းခဲ့ကြရဖူးတာမို့ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် သူတို့တွေကို ပြန်တွဲစေချင်နေကြလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ တကယ်ပဲ သူတို့ပြန်တွဲမလား၊ မတွဲဘူးလား…? ဒီဆုံတွေ့မှုကနေ ရှေ့ဆက်တက်ကြမလား၊ မတက်ကြဘူးလား…? ဆိုတာတွေကိုတော့ ဒီကမ္ဘာကြီးထဲမှာ သူတို့နှစ်ယောက်ကလွဲပြီး ဘယ်သူမှ သိနိုင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ထင်မိပါတော့တယ်။ ။
Previous Post: မျှော်လင့်တာထက်ဝင်ငွေကောင်းခဲ့တဲ့ Jurassic World: The Fallen Kingdom
Next Post: July လထဲမှာ ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ထပ်မံတွေ့ရှိရဖို့ရှိတဲ့ Dwayne Johnson